I-NCS Iiphelo zeeNqununu - Funda le nto ukubandakanyeka! - Element Society
Sithemba wena / umntu wakho omncinci wayenexesha elikhulu kunye nathi kwi-NCS kweli hlobo kwaye siyakuthanda ukukubona uqhubeka nohambo lwakho kwelinye leenkqubo zethu zezifundo.
INgqungquthela yokuThuthukiswa kweBhodi yeNtsha
date: I-2X ku-Okthobha i-2018
ixesha: 6pm ukuya kwi-7pm
Indawo: I-House House, i-Arundel Street, iS1 2NT
info: Ibhodi Yentsha Yentsha ibumba yonke into esiyenzayo njengothando! Uyakunceda ukucwangcisa ixesha elizayo lokuhlaziywa kwe-NCS, ukulungiselela iziganeko kunye nemikhankaso abantu abaselula kulo mzi bangabandakanyeka kuyo kwaye bancede ukuma uluntu olubanzi lwabantu basekuhlaleni.
Indlela ongayibhalisa ngayo: Yiza kunye nomhlangano wokubhaliweyo uze ufumane ezinye okanye i-imeyile Richard.r@elementsociety.co.uk ukuxoxa ngokubandakanyeka.
Iinkokeli kwiNkomfa yokuHuleka koQeqesho:
date: XNUMI-Oktobha ngo-3
Ixesha: 6pm - 7pm
info: Olu qeqesho lwamahhala luya kulukhupha iimodyuli kwi-Leadership, kwiDynamics yeQela, kuLwazi lokuLwazi kunye noLwazi. Olu qeqesho lujolise kukunika umda ekuphumeni kwihlabathi kunye neendlela zokuqala zokuthatha ukuba unomdla wokusebenza kwi-NCS kwikamva.
Intlanganiso ye-Element Champions Impuction:
date: 4ti ngo-Oktobha 2018
info: I-Element Champions ziza kusinceda sisasaze ilizwi malunga ne-NCs ezikolweni / kwiikholeji ngaseSheffield. Siza kukufaka i-hoodies kunye ne-support yakho kunye nokuqeqeshwa kwamahhala ukwenzela ukuba usincede sikhankasele ngamathuba e-NCS ehlobo lwe-2019!
Indlela yokubhalisa: Yiza kwintlanganiso yokuqulunqa uze ufumane ezinye okanye i-imeyile Richard.r@elementsociety.co.uk ukuxoxa ngokubandakanyeka.
Inkqubo yeMenti yeMentor:
info: Sifuna ukuqinisekisa ukuba bonke abaphumelele kwi-NCS bangaphinda badibanise kwaye baxoxe kunye nelungu labasebenzi bethu. Isicwangciso sethu se-Element Mentor sikhuthaza ukuba ubhalise kwaye ube nelungu labasebenzi njengomcebisi. Asikho iingcali kodwa siyavuya ukubeka amehlo ethu kwisicelo sakho seCV / uni okanye ukuxhaswa kunye nezicelo zomsebenzi kunye nodliwano-ndlebe.
Indlela yokubhalisa: I-imeyile eyimali Richard.r@elementsociety.co.uk ukuxoxa malunga nokufumana into eyenziwa nguMenzi.
Iprojekthi yokuVala iNkcazo yokuThengisa:
info: Ukuba uye waphefumlelwa ukuba uqhubeke nokwenza umehluko kuluntu lwasekuhlaleni kodwa ungayazi nawaphi amanyathelo okuza kuthatha emva koko eli thuba! Siza kukunceda uphendule amathuba onokuthi unomdla kuzo kunye nokukunceda ngokusayinela kubo.
Indlela yokubhalisa: I-imeyile eyimali Richard.r@elementsociety.co.uk kwaye siza kulungelelanisa usuku / ixesha elifanelekileyo lokuxoxa kunye nomsebenzi malunga namathuba.